White Chicks (2004) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Brittany Daniel, Busy Philipps, Frankie Faison, Jaime King, Jennifer Carpenter, Jessica Cauffiel, John Heard, Lochlyn Munro, Marlon Wayans, Shawn Wayans
White Chick ဆိုတဲ့ ၂၀၀၄ ထှကျ Crime,
Comedy ဇာတျကားလေးနဲ့ ရယျကွရအောငျ။
FBI အေးဂငျြ့ ညီအကို ၂ ယောကျရှိတယျ…သူတို့ညီအကို ၂ ယောကျဟာ ဒီအလုပျကိုတကယျလညျး
ဝါသနာပါသလို အတတျနိုငျဆုံးအောငျမွငျအောငျ ကွိုးစားလရှေိ့တယျ…
သို့ပမေယျ့ အလှဲကွီးဆိုတဲ့စကားလုံးက သူတို့အလုပျမှာ အမွဲကပျရကျပါလရှေိ့တယျ…
ရှငျးလရှေုတျလဆေိုတဲ့ညီအကို ၂ ယောကျဆိုပါတော့…
ကံကောငျးတာက သူတို့ ၂ယောကျရဲ့ သိက်ခာကိုပွနျအဖတျဆယျနိုငျမယျ့ အခှငျ့အရေးတဈခုရလာတယျ…
ပွသနာတောထဲရောကျနတေဲ့ လူဖွူအမြိုးသမီးတဈယောကျကို လဆေိပျကနေ Hamtonဆိုတဲ့နရောကို
ကဲ သူတို့ ညီအကို ၂ယောကျ အောငျမွငျမလား…ဘယျလိုအလှဲတှဖွေဈမလဲ….
White Chick ဆိုတဲ့ ၂၀၀၄ ထွက် Crime,
Comedy ဇာတ်ကားလေးနဲ့ ရယ်ကြရအောင်။
FBI အေးဂျင့် ညီအကို ၂ ယောက်ရှိတယ်…သူတို့ညီအကို ၂ ယောက်ဟာ ဒီအလုပ်ကိုတကယ်လည်း
ဝါသနာပါသလို အတတ်နိုင်ဆုံးအောင်မြင်အောင် ကြိုးစားလေ့ရှိတယ်…
သို့ပေမယ့် အလွဲကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးက သူတို့အလုပ်မှာ အမြဲကပ်ရက်ပါလေ့ရှိတယ်…
ရှင်းလေရှုတ်လေဆိုတဲ့ညီအကို ၂ ယောက်ဆိုပါတော့…
ကံကောင်းတာက သူတို့ ၂ယောက်ရဲ့ သိက္ခာကိုပြန်အဖတ်ဆယ်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတစ်ခုရလာတယ်…
ပြသနာတောထဲရောက်နေတဲ့ လူဖြူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို လေဆိပ်ကနေ Hamtonဆိုတဲ့နေရာကို
ကဲ သူတို့ ညီအကို ၂ယောက် အောင်မြင်မလား…ဘယ်လိုအလွဲတွေဖြစ်မလဲ….
Brittany Daniel Busy Philipps Frankie Faison Jaime King Jennifer Carpenter Jessica Cauffiel John Heard Lochlyn Munro Marlon Wayans Shawn Wayans
Anne Dudek Brad Loree Brittany Daniel Busy Philipps Casey Lee David Lewis Drew Sidora Eddie Velez Faune A. Chambers Frankie Faison Fraser Aitcheson Heather McDonald Jaime King James Michalopolous Jennifer Carpenter Jennifer Oleksiuk Jessica Cauffiel John Heard John Reardon Kevin Blatch Kristi Angus Lochlyn Munro Luciana Carro Maitland Ward Marlon Wayans Marshall Virtue Paul Lazenby Rochelle Aytes Shawn Wayans Steven Grayhm Suzy Joachim Taras Kostyuk Terry Crews Zoltan Barabas
Option 1 storage.msubmovie.com 544 MB SD (480p)
Option2megaup.net 544 MB SD (480p)
Option3datbu.com 544 MB SD (480p)
Option4uptomega.com 544 MB SD (480p)
Option5yuudrive.me 544 MB SD (480p)
Option6sharer.pw 544 MB SD (480p)
Option 12 storage.msubmovie.com 2.3 GB FHD AC3 5.1
Option 13 megaup.net 2.3 GB FHD AC3 5.1
Option 14 sharer.pw 2.3 GB FHD AC3 5.1
Option 15 yuudrive.me 2.3 GB FHD AC3 5.1
Option 16 datbu.com 2.3 GB FHD AC3 5.1